ရေဒီယိုမှရေဒီယို - ဆုလာဘ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ - ချစ်ခြင်း၊ လိင်နှင့်အင်တာနက်
ပင်မစာမျက်နှာ ရေဒီယိုအပေါ် TRF
UK အစိုးရသည် အသက် စိစစ်ခြင်း အပါအဝင် အွန်လိုင်း ဘေးကင်းရေး ဥပဒေကြမ်းကို ပြောင်းလဲခဲ့ကြောင်း ကြေညာသောအခါ၊ Mary Sharpe အား လန်ဒန်ရှိ Shelagh Fogarty တွင် ပါဝင်ရန် ဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ ဒါဟာ 8 ဖေဖော်ဝါရီ 2022 တွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Shelagh သည် ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပေးခြင်းဖြင့် စတင်သည်၊ ထို့နောက် 0.51 LBC သတင်းထောက် Charlotte Lynch သည် ဥပဒေပြုခြင်းဆိုင်ရာ နောက်ခံအစီရင်ခံစာကို စတင်သည်။ ယခုအခါတွင် ၎င်းသည် စီးပွားဖြစ် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ ဆိုက်များနှင့် ဝဘ်ဆိုက်များ နှစ်ခုလုံးကို အသုံးပြုသူ ဖန်တီးထားသော ပရိတ်သတ်များ ကဲ့သို့သော တစ်ခုတည်းသော အကြောင်းအရာဖြင့် လွှမ်းခြုံနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။ Mary သည် 5.05 တွင် စကားပြောဆိုမှုတွင် ပါဝင်ပြီး အပြောင်းအလဲများ အဘယ်ကြောင့် အလွန်လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြသည်။
Mary Sharpe ကိုဖိတ်ကြားခဲ့သည် စာရာ Brett ရေဒီယို5မှထုတ်လွှင့်ပြီး NHS တွင်လိင်ကုထုံးလိုအပ်နေသည့်လူငယ်များအရေအတွက်သိသိသာသာမြင့်တက်လာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးရန်။ ၂၀၁၁ အောက်တိုဘာ ၇ ရက်တွင်ပြုလုပ်သောဤဆွေးနွေးမှု၌အသက် ၁၉ နှစ်အောက်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုသည့်ကုသမှုအတွက်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းသုံးဆတိုးလာကြောင်းကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်းလူငယ်များအတွက်လိင်ကုသသူများအတွက် NHS လွှဲပြောင်းမှု ၁၄၀၀ ရှိခဲ့သည်။ လာမည့် ၂၀၁၇ မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ ၄၆၀၀ အထိတိုးပွားလာသည်။ ဒီပြောင်းလဲမှုကိုမောင်းနှင်ရာတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံ၏အခန်းကဏ္ on နှင့် ပတ်သက်၍ မာရိ၏အကြံဥာဏ်များကိုနားထောင်ပါ။
ညနေ UK မှာထုတ်လွှင့်ရေဒီယို4ပေါ်အထင်ကရသတင်းနှင့်မျက်မှောက်ရေးရာအစီအစဉ်ဖြစ်ပြီး, အကယ်စင်စစ်လောကဓာတ်လုံးကိုလှည့်ပတ်။ တနင်္လာနေ့ 1st ဧပြီလ 2019 တွင် အီဗန် Davis က သတင်းစာဆရာတစ်ဦး6မိနစ် segment ကိုမိတ်ဆက် ခရစ် Vallance အွန်လိုင်းမှညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းအားကလေးများအလွယ်တကူလက်လှမ်းမီခြင်းကိုလျှော့ချရန် UK ၏ Age Verification system အကြောင်း TRF ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Mary Sharpe ကဤဥပဒေသည်အဘယ်ကြောင့်ပြီးပြည့်စုံမှုမရှိသေးသော်လည်းအရေးကြီးနေသေးကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဘီဘီစီရေဒီယိုစကော့တလန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသခံကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ TRF အများအပြားရှိုးပျေါမှာထငျရှားခဲ့ကြပြီးသင်အမြဲကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်များအတွက်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ် ဘီဘီစီအသံ.
အွန်လိုင်းဖက်ရှင်လက်လီအရောင်းဆိုင် Boohoo.com တွင်ကြွေးကြော်သံကိုအသုံးပြုရန်အတွက်ကြော်ငြာစံသတ်မှတ်ရေးအာဏာပိုင်မှတားမြစ်ထားသည့်၎င်း၏ကြော်ငြာတွင်ကြော်ငြာတစ်ခုရှိခဲ့သည် “ ဝတ်လစ်စလစ်ပို့” အရေပြားရောင်စုံအဝတ်အစားများကိုမြှင့်တင်ရန်။ Mary Sharpe သည် Jess McBeath နှင့် 17 အောက်တိုဘာ 2019 တွင်ပြုလုပ်သော Kaye Adams ပြပွဲတွင်အခြားဝေဖန်သုံးသပ်သူများနှင့်ပါ ၀ င်သည်။ ကလေးသူငယ်ကာကွယ်ရေးရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်တရားစီရင်ခြင်း၏ပညာကိုလေ့လာသည်။
ဆယ်ကျော်သက် sexting ၏ရိုက်ခတ်မှုများကဘာတွေလဲ? မာရိကရှပ်မုဒိမ်းအကျပ်အတည်းစကော့တလန်နှင့်အတူ3စက်တင်ဘာလ 2019 အပေါ်ကောင်းမွန်သောနံနက်စကော့တလန်အပေါ်ထင်ရှား၏။ စကော့တလန်အတွက် sexting နှင့်ပညတ္တိကျမ်းနှင့် ပတ်သက်. ပိုမို Read ဒီမှာ.
ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်အသက်အတည်ပြုများအတွက်ပစ်လွှတ်သည့်ရက်စွဲများ၏ကြေငြာချက်နှင့်အတူ, မာရိရှပ် 18 ဧပြီလ 2019 အပေါ်လော်ရာ Maxwell နှင့်အတူတစ်နာရီကြာဖုန်းကို-in ကိုဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ အောက်ပါ6မိနစ်ထုတ်ယူသည့်အစီအစဉ်၏နောက်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်သူမ၏အကြံအစည်ပါရှိပါတယ်။
porn နှင့်ပတ်သက်ပြီးလူငယ်များဖို့ပြောနေတာအားဖြင့်တည်ခင်းဧည်တစ်ဦးဆွေးနွေးငြင်းခုံများအတွက်ဆောင်ပုဒ်ခဲ့သည် ကေးကအဒမ် ၂၀၁၀ ခုနှစ်မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် Mary Sharpe သည် Channel 20 docu-series“ Mums Make Porn” မှ Andrea Chapman ၏အကြံပေးနှင့်ညစ်ညမ်းသောတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ Jerry Barnett နှင့်အတူသရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
မာရိကရှပ်သည့်အပေါ်တိုတောင်းတဲ့အစိတ်အပိုင်းအတွက်သဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့်ညစ်ညမ်းအကြောင်းပြောနေတာကိုနားထောငျ စတီဖင် Jardine 15 ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 အပေါ်ပြသပါ။
ယောဟနျသ Beatty 20 နိုဝင်ဘာလ 2018 အပေါ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအပေါ်တစ်ဦးဝိညာဉျတျောဆွေးနွေးမှုကျင်းပခဲ့တယ်။ အဆိုပါဧည့်သည်များပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးစကော့တလန်နှင့်မင်းသမီး Emma Kenny ကနေမာရိသညျရှပ်, အန်း Chilton ခဲ့ကြသည်။
စတီဖင် Jardine 17 ဇူလိုင်လ 2018 ပေါ်တွင်ရေဒီယိုစကော့တလန်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်နံနက်အစီအစဉ်တွင်ဆရာနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မိခင်နှင့်အတူ, မာရိရှပ်မေးမြန်းထားသည်။
မာရိကရှပ်ဒစ်ဂျစ်တယ်မူးယစ်ဆေးဝါးအပေါ်တစ်ဦး 10 မိနစ် slot ကအတွက်ရေဒီယို Napier ကနေမှ Ian McNally တို့ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။ 27 အောက်တိုဘာလ 2017 အပေါ်အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။
မော်စကိုရေဒီယို Sputnik World Service 11 မိနစ်မာရိသညျရှပ်မေးမြန်းထားသည်။ အင်တာဗျူးစဉ်အတွင်းသူတို့အင်္ဂလန်နှင့်ဝေလနယ်များတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်ကလေးက-on-ကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုအတွက်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာမြင့်တက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာ9အောက်တိုဘာလ 2017 အပေါ်တစ်ဦးကမ္ဘာ့ကျယ်ပြန့်ပရိသတ်ကိုမှထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
မာရိကရှပ်လန်ဒန်မြို့ရှိ LBC ရေဒီယိုပေါ်မှာဤ3မိနစ်အစက်အပြောက်, 21 သြဂုတ်လ 2016 အတွက် Stig အာဗေလအားဖြင့်မေးမြန်းထားသည်။ ဒါဟာဗြိတိန်ကျယ်ပြန့်သွား၏။
မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်အတွက်ရေဒီယို Ulster အပေါ်စတီဖင် Nolan နဲ့ 18 မိနစ်စကားပြောဆိုမှုအတွက်ညစ်ညမ်းအသိအမြင်လေ့ကျင့်ရေးအကြောင်းဆွေးနွေးသူ Mary ရှပ်။
ကလစ်နှိပ်ပါ ဒီမှာ အကယ်၍ Stephen Nolan ၏ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောပြောဆိုမှုများကိုပိုမိုနားထောင်လိုလျှင်။